Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo Baydhaba u sii joogi doona Dib-u-shiinta Reer KGS – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo Baydhaba u sii joogi doona Dib-u-shiinta Reer KGS
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan ayaa u muuqda in waqtigiisa fasaxa, inta uu xiran yahay Kalfadhiga Golaha Shacabka oo muddo laba bila ah, uu ku qaadan doono Baydhaba iyo deegaano kale oo ka tirsan Koofur Galbeed Soomaaliya, si uu xal uga gaaro xumaan iyo cuqdad ay dadka Reer Baydhaba ka qaadeen doorashadii dhawaan halkaas ka dhacday ee uu Madaxweynaha KGS ku noqday Mudane Cabdicasiis Lafta-Gareen, laguna dhigay xabsiga Mukhtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur), oo doorashadaas u ahaa musharrax.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa sheegay iney sii joogi doonaan Baydhaba, oo uu halkaas kulamo joogto ah kula qaadan doono dadka deegaanka, oo ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka, si xal dhab ah looga gaaro tabashada dadka KGS ee Doorashadii 19-kii Diseembar ee sanadkii tagay ka dhacday Baydhaba iyo xarigga Abuu Mansuur. Odayaasha, oo guddi ay iska soo xuleen ay shalay Baydhaba kula kulmeen Guddoomiyaha, waxay sheegeen iney diyaar u yihiin wixii xal u ah KGS.
Bidix Guddoomyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal, midig Madaxweynaha KGS Lafta-Gareen, hareeraha Odayaaha Dhaqanka KGS
Sida uu baahiyey Xafiiska Warfaafinta ee Golaha Shacabka, waxa uu Guddoomiye Mursal ku dhiiragelinayaa Madaxweynaha KGS, Cabdicasiis Lafta Gareen, inuu dhaqaajiyo dib-u-shiisiinta dadka deegaanka uu u yahay Madaxweynaha, si wada-shaqeynta iyo is-aaminaadda bulshaddu u adkaato, KGS-na ay u noqoto meel la maamuli karo. Madaxweyne Lafta-Gareen, oo qudhiisa qeyb ka ahaa kulankii uu shalay Guddoomiye Mursal la yeeshay Odayaasha KGS, waxa uu sheegay inuu la fariisan doono cid walba, si xalka tabashadooda ay fursad ugu noqoto xasiloonida deegaanka.
Maalmaha soo socda ayaa Baydhaba la filayaa in looga dhawaaqo, lagana bilaabo kulan/kulamo dib u hishiisiin ah, oo dadka Reer KGS oo dhan uu Maamulka KGS uga saarayo wixii tabasha ah ee ay madaxweynanimadiisa ka qaadeen. Hase ahaatee, odayaashii shalay lala qaatay kulanka arrintaas hordhaca u ah waxay sheegeen iney u tanaasuli donaan danta KGS, ayna diyaar u yihiin in ay la shaqeeyaan Madaxweyne Lafta-Gareen, si deganaanshaha iyo ammaanka deegaanka loo adkeeyo.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal ayaa, kulankii uu shalay la qaatay, ugu laab-qaboojiyey Odayaasha KGS iney DFS ka abaalmarin doonto dadaalkooda ay, sida uu sheegay, udub dhexaadka ugu yihiin Dhismaha iyo jiritaanka Maamulka KGS. “Mar waliba waa in la xusuusnaadaa inaad tihiin tiirarkii dawladnimada, runtii waana la idin baahanyahay. Waa in la idinka warqabaa, annagoo ah Madaxdii Federaalkana waan ka shaqeen doonnaa inaan xuquuqdiina heshaan” ayuu yiri Guddoomiye Mursal.
Qaar ka mid ah Odayaasha Dhaqanka Koofur Galbeed Soomaaliya
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo Odayaasha Dhaqanka KGS kala hadlay xaaladda maamulkooda
Muxuu khilaafka Labada Gole ee Baarlamaanka u dhimi karaa Dowladnimada Soomaaliya?